လာမယ့် ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာ…မွတ်စလင်တွေ..ဘယ်သူ့ကို..မဲ ပေးသင့်သလဲ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မောင်မောင် – ခေတ်သစ်ဟင်္သာကိုးသောင်း
Myanmar Is More than Aung San Suu Kyi »
လာမယ့် ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာ…မွတ်စလင်တွေ..ဘယ်သူ့ကို..မဲ ပေးသင့်သလဲ
(ပုဂ္ဂလိက ခံစားမှု …အတွေး…အမြင်…ကို…တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်)
ဒီမေးခွန်းက…ဒီရက်ပိုင်း…chart box မှာ…အကြိမ်အများကြီး…အမေးခံရတဲ့… မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်…
ကျွန်တော်ဟာ…နိုင်ငံရေးသမား…မဟုတ်ပါဘူး….နိုင်ငံရေးကိုလဲ…မလုပ်တတ်ပါဘူး… ဝါသနာလဲမပါ ပါဘူး….
သို့သော်လဲ…မေးခွန်းရှိလာပြီဆိုတော့…ကိုယ်သာမဲပေးခွင့်ရရင်…ကိုယ်လဲ…ဘယ်သူ့ကို…မဲ ပေးမလဲ ဆိုတာလေးကို….တွေးတော…ဆင်ခြင်ကြည့်မိပါတယ်….
မြန်မာပြည်မှာ…အစ္စလာမ်သာသနာလွှမ်းမိုးစေလိုစိတ်မရှိပါဘူး…သမိုင်းအစဉ်အလာ အတိုင်း…ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင်တွေအဖြစ်နဲ့.မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု… ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေနဲ့အညီ…ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေချင်ပါတယ်…
ဥပဒေနဲ့မညီသူ…ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်သူ…ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်သူ…မည်သည့်… ရာဇဝတ်သားကိုမဆို…ဥပဒေတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း…အရေးယူသည်ကို…လက်ခံပါ သည်…
ဒါတွေဟာ…မြန်မာနိုင်ငံသား…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့…အမြင့်မားဆုံး…မျှော်မှန်း ချက် ဖြစ်ပါတယ်…
(၁) ဘယ်သူ့ကိုမှ မဲမပေးပဲ နေကြမလား….
(၂) မွတ်စလင်ပါတီတွေကိုပဲ မဲပေးကြမလား…
(၃) တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုပဲ မဲပေးကြမလား…
(၄) NLD ကို မဲပေးကြမလား…
(၅) ကြံ့ခိုင်ရေးကိုပဲ မဲပေးကြမလား……….ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ…သွားတွေ့ပါတယ်…
(၁)ဘယ်သူ့ကိုမှ မဲမပေးပဲ နေကြမလား….
ဘယ်သူ့ကိုမှ မဲမပေးပဲ နေကြတာဟာ…ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးတော့…မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့…ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ…ရရှိထားတဲ့…ကျွန်တော်တို့ရဲ့…အခွင့်အရေးကို…ကျွန်တော်တို့…ကိုယ်တိုင်က…ပစ်ပယ်လိုက်ရာကျနေလို့ပါဘဲ…ကျွန်တော်တို့ရဲ့…မဲ ပေးနိုင်တဲ့ အင်အားကို…ထိုက်တန်စွာ…အသုံးချဖို့ဆိုတာကလည်း… ကျွန်တော်တို့…ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ…မဲပေးကြမှ…ရရှိပိုင်ဆိုင်လာမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ…
မွတ်စလင်တွေက…မွတ်စလင်ပါတီကိုပဲ…မဲ…ပေးကြမယ်ဆိုတာ…သာမာန်အားဖြင့် ပြောစရာမရှိပေမဲ့…လက်ရှိအခြေအနေနဲ့…အချိန်အခါအရတော့…မဟာဗျူဟာအရ… အောင်မြင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်း…မဟုတ်ပြန်ပါဘူး….
ဆန္ဒမဲ…ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့…၅၀% ကျော်…မွတ်စလင်ရှိနေတဲ့မဲဆန္ဒနယ်က… ဘယ်နှခုများရှိနေလို့လည်း…နောက်…မွတ်စလင်တွေ…မဲအများဆုံးရလို့…လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှည်တွေ…အမတ်တွေဖြစ်သွားပါပြီတဲ့…ဘယ်သူများ…အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ဖို့…အရွေးအချယ်ခံကြရမှာတဲ့လည်း…
အရွေးချယ်ခံလိုက်ရမယ့်…မွတ်စလင်အမတ်တွေဟာ…တိုင်းပြည်အတွက်ရော…မိမိကို မဲပေးရွေးချယ်လိုက်တဲ့…မွတ်စလင်တွေအတွက်ရော…ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရကြမှာ… မဟုတ်ဘူးလို့…ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်….
လောလောဆယ်…၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလကတော့…သူတို့ပါတီတွေ…ရှင် သန်ရပ်တည်ရေးက…ပထမဦးစားပေးလုပ်ရမယ့်အလုပ်လို့ထင်ပါတယ်…(ကျွန်တော့် အမြင်ပါ…မှားရင်လည်း…မှားနိုင်ပါတယ်)
ဒီတော့…မွတ်စလင်ပါတီတွေကိုပဲ…မဲ ပေးကြမယ်ဆိုတာဟာလည်း….မဟာဗျူဟာ အရ… အောင်မြင် နိုင်တဲ့… နည်းလမ်း…မဟုတ်ပြန်ပါဘူး…
ဒီကနေ့…၆ပွင့်ဆိုင်မှာ…တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်…တက်ရောက်လာသူက… ရခိုင် အေးမောင်…(လူမျိုးစုလွှတ်တော်ကနေ…ရွေးချယ်ခဲ့တာလို့…သိရပါတယ်)…
ရခိုင်အေးမောင်ဆိုတာက…ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ…လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ နေရာမှာ…လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို ရှေ့ဆုံးကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့.. ရာဇဝတ်တရားခံတယောက်…
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ…မဘသ တွေ…၉၆၉ တွေ…မရောက်ခင်အချိန်ထဲက… စစ်ဘုန်းကြီးတွေက…နေရာအနှံ့ ရောက်နေပြီးသား…စစ်ထောက်လှမ်းရေးအလုပ်နဲ့… အစ္စလာမ် မုန်းတီးရေးအတွက်…တိုင်းရင်းသားတွေကို…ဦးနှောက်ဆေးထားပြီးသား …အမုန်းတရားတွေ…ရိုက်သွင်းထားပြီးသား…
ဦးခွန်ထွန်းဦးလိုထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့နှုတ်ကတောင်…ဘာသာရေး… လူမျိုးရေး ခွဲခြားတဲ့…စကားတွေထွက်လာပြီးပြီဆိုတော့….
မွတ်စလင်တွေ…ရိုဟင်ဂျာတွေမှာတော့…အော်လိုက်ရတာ…သူ့ကိုလွှတ်ပေးဖို့….ဟောအခုသူကလွတ်လာတော့…ရှမ်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး…မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဦး ဆုံး သမ္မတကြီး…စပ်ရွှေသိုက်ရဲ့…”ရိုဟင်ဂျာ..တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ရင်…ကျွန်တော်တို့… ရှမ်းလူမျိုးတွေလည်း…တိုင်းရင်းသား…မဟုတ်ဘူး..” ဆိုတဲ့စကား…ဘယ်လွှင့်ပစ်လိုက် သလဲ..မသိဘူး…
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေရာအနှံ့အပြားမှာ…မွတ်စလင်တွေ…ပက်ပက်စက်စက်…မတရား အလုပ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာ…တခွန်းလောက်များ…လူ့အခွင့်အရေး…စံချိန်စံညွှန်းလေးနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး…ပြောသံကြားဘူးပါသလား…
မွတ်စလင်တွေကတော့…ကချင်တွေအရေးအတွက်…စာနာစိတ်အပြည့်နဲ့…လှူကြတန်း ကြ…ပြောဆိုပေးကြနဲ့…ပြည်တွင်းမှာရော…နိုင်ငံတကာမှာပါ…ကျယ်ကျယ်လောင် လောင် … လုပ်ပေးခဲ့ကြတာပါ…
လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့…ရိုဟင်ဂျာတွေ…မွတ်စလင်တွေကို…အဓိက တိုက်ခိုက် ဖို့…ဖွဲ့စည်းထားတဲ့…AA ရခိုင်သူပုန်အဖွဲ့ကိုတောင်…လေ့ကျင့်ပေး…နေရာပေးထား သေးတယ်…
(၄) NLD ကိုမဲပေးကြမလား….
ဟိုး…ပါတီထိပ်ဆုံးခေါင်းဆောင်ရဲ့…စိတ်မချရတဲ့…စိတ်နေစိတ်ထားကနေ…အောက် ခြေပါတီဝင်တွေ မဘသနဲ့တွဲပြီး…မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေအထိ ပါဝင် ပတ်သက်နေတာက…စိတ်ပျက်စရာ…
အကယ်၍များ…၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ…အမတ်နေရာအများစုအနိုင်ရပြီး… NLD က အစိုးရဖွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်…(.မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့)…ဒေါ်စု…သမ္မတကြီးဖြစ်လာခဲ့ရင်…ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲ…စဉ်းစားကြည့်ရအောင်….
နဂိုကမှ…မွတ်ဒေါင်းပါတီ…ကုလားအားပေးတဲ့ပါတီလို့…အစွတ်စွဲခံရတာနဲ့တင် ဘာတခုမှ…ပီပီပြင်ပြင်…ပြန်မရှင်းနိုင်ခဲ့ပဲ…ဘာမှမပြောနိုင်ပဲ…မဘသ ကို ကြောက်နေ တဲ့ပါတီ….သူတို့က…မဘသတွေ လုပ်နေတဲ့…မွတ်စလင်တွေကို…တိုက်ခိုက်နေတာ… တွေကို…ဘာများပြောရဲမှာလဲ…ဘယ်လိုများ…တားရဲမှာလဲ….
အဲ့ဒီတော့…ဒေါ်စု သို့မဟုတ်…ဦးတင်ဦး သမ္မတဖြစ်လာတော့ရော
မဘသ တွေ…စွမ်းအားရှင်တွေ…ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို…ဘယ်အဖွဲ့အစည်းအားကိုး…ဘယ်က အင်အားနဲ့…ဟန့်တားနိုင်မှာလဲ…
အတိုက်အခံ…ပါတီအာဏာရလာပြီဆိုတာနဲ့…ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့…မူလ ဇစ်မြစ်ပါတီ ဖြစ်တဲ့..စစ်တပ်က…အတိုက်အခံပါတီ…အကျပ်အတည်းဖြစ်စေမဲ့…အဖျက်အမှောင့် လုပ်ငန်းတွေကို…ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး…ပြုလုပ်လာတော့မှာပဲ…
မဘသတွေ…စွမ်းအားရှင်တွေ အသုံးချပြီး…ပြသနာပေါင်းစုံ…ရှာမယ်…ပြသနာပေါင်းစုံ …လုပ်မယ်…
ကြံ့ခိုင်ရေးဆိုတာက…စစ်အစိုးရရဲ့…အဖွဲ့အစည်းပါပဲ…စစ်တပ်က…မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် မှာ…အောက်တန်းကျတဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့…သစ္စာဖောက်ဖျက်ခဲ့တာ…၁၉၆၂ခုနှစ်ကစလို့…. ယနေ့ထက်တိုင်ဆိုတော့…၅၃နှစ်…ကျော်လာခဲ့ပြီ…
ပြည်သူတွေအပေါ် မကောင်းခဲ့ဘူး…သံဃာတွေအပေါ် မကောင်းခဲ့ဘူး…လယ်သမား တွေအပေါ် မကောင်းခဲ့ဘူး…အလုပ်သမားတွေအပေါ် မကောင်းခဲ့ဘူး…ကျောင်းသား တွေအပေါ် မကောင်းခဲ့ဘူး…တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် မကောင်းခဲ့ဘူး…
တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးကို ရိုက်ချိုး ဖျက်စီးခဲ့ကြတယ်…တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးကို စုတ်ပြတ်နေအောင်လုပ်ခဲ့တယ်…တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတတွေကို ဘရမ်းဘတာ လုပ်ပစ်ခဲ့တယ်…တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘာသာ သာသနာရေးကို အကျည်းတန်စေခဲ့တယ်… တိုင်းပြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပျက်စီးစေခဲ့တယ်…တိုင်းပြည်တခုလုံးရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ သိက္ခာနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို…အဆုံးစွန်အထိ နင်းခြေပစ်ခဲ့တယ်…
စစ်အစိုးရ မကောင်းကြောင်းတွေကို…ရေးသားဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်…တထောင့်တည ပုံပြင်ထက် ရှည်လျားလွန်းလို့…စာအုပ်ပုံကြီး…ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်…
စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ…ကောက်ကျစ် ယုတ်မာကြတယ်..အရှက်အကြောက် ကင်းမဲ့စွာ…ဘလောင်းဘလဲစကားတွေပြောတတ်ကြတယ်…
ပြီးခဲ့တဲ့…၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက…ဦးအောင်သောင်းဟာ…သူတို့ ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့ …အောင်နိုင်ရေးအတွက်…မန္တလေးက ခလီဖဟ်ဦးသိန်းဝင်းအောင်ကို…စည်းရုံးပြီး… မွတ်စလင်တွေ…အခွဲခြား…အဖိနှိပ်မခံရဖို့အတွက်…အကာအကွယ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ ဂတိနဲ့…မဲတွေတောင်းခဲ့တယ်…
သူရဲ့နောက်လိုက် နောက်ပါတွေကို…တသွေးတသံ တမိန့်နဲ့…အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ သြဇာအာ ဏာရှိတဲ့…ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ခလီဖာဟ်ဦးသိန်းဝင်းအောင်က…သူရဲ့နောက် လိုက်တွေ..ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ…ကြံ့ခိုင်ရေးကို မဲပေးဖို့…ညွှန်ကြားခဲ့တယ်…
ခလီဖဟ်ဦးသိန်းအောင်တာဝန်ယူထားတဲ့နေရာတိုင်းမှာ…ကြံ့ခိုင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် တွေ…အနိုင်ရခဲ့ကြတယ်…
မွတ်စလင်တွေ…အတိုက်အခိုက်မျိုးစုံခံလာရတဲ့အတွက်…ခလီဖဟ်ဦးသိန်းဝင်းအောင်က…ဦးအောင်သောင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ရဖို့…၂၀၁၂ခုနှစ်ကထဲက…ကြိုးစားလာခဲ့တာ. ဘာအဖြေမှမရခဲ့ဘူး….ဦးအောင်သောင်းက အတွေ့တောင်မခံခဲ့ဘူး…
မဲမပေးဘဲလည်း…မနေသင့်ဘူး…ဆိုတော့…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဈေးဆစ်ပြီး…မဲပေးရမဲ့သူ ပြန်ရှာရအောင်…
ခက်တာက…ဘာသာရေးအဖွဲ့ဆိုတော့လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့…မသက်ဆိုင်သယောင်ယောင် ဒါပေမဲ့…အစ္စလာမ်သာသနာမှာက…ခွဲခြားမှုမရှိဘူး…ဘာသာရေးလည်း…နိုင်ငံရေးပဲ… နိုင်ငံရေးလည်း…ဘာသာရေးပဲ…
Facebook မှာ…ဂျာနယ်တွေမှာ…စာစောင်တွေမှာ…နိုင်ငံခြား မီဒီယာတွေမှာ…DVB ဒီဘိတ်လို…နေရာမျိုးတွေမှာ…နောက်ဆုံး…လက်ကမ်းစာစောင်တွေမှာ..စကားပြော တောင်းဆိုကြမယ်….
ကျွန်တော်တို့…မွတ်စလင်တွေအတွက်…အခြေခံဥပဒေက ပြဌာန်းထားတဲ့…အခွင့် အရေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်…ဘယ်သူကလုပ်ဆောင်ပေးမလဲ…ဆိုတာ…မေးရမယ်.. အဲ့ဒီလို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်…မွတ်စလင်မဲတွေရအောင်… စည်းရုံးပေးမယ်…ဆိုတဲ့စကားကို…အများသိအောင်…ကမ္ဘာကသိအောင်…ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်…ပြောပေးကြဖို့…လိုပါတယ်…
အဲ့ဒီလို…မွတ်စလင်တွေရဲ့…အခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အရေးတွေ…ရရှိအောင်…လုပ်ပေး နိုင်တာကလည်း…NLD နဲ့…ကြံ့ခိုင်ရေး…ဒီ ၂ဖွဲ့ပဲရှိတယ်…
အဲ့ဒီတော့…ဒီ ၂ဖွဲ့ထဲက….ဘယ်သူက…မွတ်စလင်တွေရဲ့…မဲကို လိုချင်သလဲ…လိုချင် တဲ့အဖွဲ့က…မွတ်စလင်တွေ…ယုံကြည်စိတ်ချရမဲ့အလုပ်တွေကို…အယင်လုပ်ပြဖို့… တောင်းဆိုရပါမယ်…
ဥပဒေဘောင်အတွင်းက တောင်းဆိုချက်တွေ…တနိုင်ငံလုံးအကျိုးရှိမဲ့တောင်းဆိုချက် တွေပဲတောင်းဆိုမှာပါ…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့…ဒီကနေ့…ဒီနိုင်ငံမှာ… Rule of Law မရှိဘူးလို့…အမြဲ ပြောလေ့ရှိပါတယ်…Rule of Law ရှိလာအောင်လုပ်ဖို့…အာဏာကို…လိုချင်ပါတယ် လို့ ပြောပါတယ်…
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့…ကျွန်တော်အထက်က..တင်ပြထားသလို…ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်…သမ္မတကြီးဖြစ်လာလည်း… Rule of Law ရှိလာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့… အနေအထား…မရှိပါဘူး…
ဘာသာရေး…လူမျိုးရေးကိစ္စမှ မဟုတ်ပါဘူး…တခြား…လူမျိုးစုပြသနာကို ဖြေရှင်းတဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်…လယ်သမားပြသနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်…အလုပ်သမား ပြသနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်…လယ်ယာမြေ ပြသနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်…ပညာရေး ပြသနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်…နယ်စပ်ပြသနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်…သယံဇာတခိုးထုတ်တဲ့ပြသနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်…သမ္မတကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်…Rule of Law နဲ့အညီ…ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့… ဘယ်သူ့အားကိုးနဲ့လုပ်မှာလဲ…ဘယ်အဖွဲ့အစည်းအားကိုးနဲ့…လုပ်မှာလဲ…
နေရာတိုင်းမှာက Rule of Min Aung Hline ဖြစ်နေတယ်လေ…
အဲ့ဒီတော့…NLD အနေနဲ့…ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ရင်…အဆင်သင့်ပြင်ဆင် ပြီးသား ဖြစ်တဲ့…ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ…လက်နက်ကိုင်တပ်များရဲ့…အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး… ကာ/ချုပ်က…သမ္မတရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရ…အလုပ်လုပ်ရမဲ့သူ…ဖြစ်ရင်ဖြစ်…မဖြစ်ခဲ့ရင် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်မှုထိန်းသိမ်းရေးတပ်ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး…အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကအစ တာဝန်ယူပေးဖို့…တောင်းဆိုထားပေးရပါမယ်…
ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ…ဘက်လိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့မဟုတ်ပဲ…Rule of Law ကို အကောင် အထည် ဖေါ်ဆောင်ပေးဖို့သက်သက်…နိုင်ငံတော်သမ္မတကို…အကူအညီပေးဖို့ သက် သက်…မဖြစ်မနေ…ဖိတ်ခေါ်ရမှာပါ…
အဲ့ဒီလိုမှ…မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့…NLD အာဏာရတာဟာ…တိုင်းပြည်ကို…ပိုမို ဆိုးဝါးလှတဲ့…အခြေအနေတရပ်ထဲကို…တွန်းပို့လိုက်တာဘဲ..ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်…
သူကတော့ ရှင်းပါတယ်…ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့…အတိတ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို… သင်္ခန်းစာယူပြီး…အနာဂတ်မှာ…အေးချမ်းသာယာတဲ့…ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကို…စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့တည်ဆောက်မယ်လို့…ဆုံးဖြတ်ထားရင်…(ထင်တော့ မထင်ပါဘူး) ကျွန်တော်တို့…မဲပေးဖို့…ဝန်မလေးပါဘူး…
တရားခံများဖြစ်ကြတဲ့…ဝီရသူ…ပါမောက္ခ…နာယကတို့နဲ့…သူတို့ရဲ့ နောက်လိုက်နောက် ပါ…သံဃာအယောင်ဆောင်တွေ…မဘသတွေ…စွမ်းအားရှင်တွေကို…အရေးယူပေးရပါ မယ်…
ဒီအလုပ်တွေကို…ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီမှာ…ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်ပေးရပါ မယ်…
အဲ့ဒီ…NLD လုပ်ပေးရမဲ့အချက်နဲ့…ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ပေးရမဲ့အချက်…၂မျိုးစလုံးကို… ကျွန်တော်တို့…မွတ်စလင်တွေက…တရားဝင်ရော…တရားမဝင်ပါ…နေရာတကာ ကနေ ရေးသားတောင်းဆိုသင့်ပါတယ်…
တောင်းဆိုချက်တွေကို…လူပေါင်းစုံက…နေရာပေါင်းစုံမှာ…နည်းပေါင်းစုံနဲ့…နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ…ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက ခေါင်းဆောင်တွေအထိရောက်အောင်…ရွေး ကောက်ပွဲမပြီးမချင်း…မရပ်မနားပို့ပေးနေရပါမယ်…
NLD ရော…ကြံ့ခိုင်ရေးကရောဒီတောင်းဆိုချက်တွေကို…မတုန့်ပြန်ဘူး…အဖြေမပေးဘူး မဖြည့်ဆည်းပေးဘူးဆိုရင်လည်း…သူတို့အားလုံးရဲ့ သဘောထားကို…ကမ္ဘာမှာ…မှတ် တမ်းတင်ပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်…
ဘယ်သူ့ဆီကမှ…ဘာအဖြေမှမရဘူးဆိုရင်တော့…မဲပေးဖို့ကိစ္စ…ခေါင်းအရှုပ်ခံမနေပါနဲ့ တော့…ကိုယ့်အရပ်…ကိုယ့်ဒေသနဲ့ကိုယ်…ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်…မဲ…ပေးချင်ပေး… မပေးချင်နေ…သင့်တော်သလိုသာ…လုပ်လိုက်ကြပေတော့…
ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက်ကတော့ အခြေအနေပေးသလို…ဆက်လက်လှုပ်ရှားသွား ကြယုံပဲပေါ့…
(နိုင်ငံရေးကို နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့…အကြံဥာဏ်ကိုလည်း…နားထောင် ကြည့်ကြပါ….)
This entry was posted on April 14, 2015 at 3:59 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “လာမယ့် ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာ…မွတ်စလင်တွေ..ဘယ်သူ့ကို..မဲ ပေးသင့်သလဲ”
Master Pie with Maung Maung Skw and 48 others
တပြည်လုံး တိုးဝှေ့နေကြတဲ့ သင်္ဘောဆိပ်
ခရီး ၂၀၁၅ အတွက် ပြင်နေကြတာ
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်နဲ့ Minorities
ကိုရွှေ အစိုးရက သူ့ရှိသမျှအင်အားတွေနဲ့
၉၆၉ နဲ့ မဘသ တို့ပါ အစစ် ပါ လိုက်သေး
ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး နဲ့
မွတ်စ် တွေလဲ ဘယ်အုပ်စုနောက်လိုက်မလဲငြင်းရင်း
ဒါပေမဲ့ ဒီသင်္ဘောက ကျွန်းပါတ်သင်္ဘော ဗျ။
လိုက်ချင်လိုက် l နေချင်နေခဲ့ ၂၀၂၀ ကျ ဒီမှာ ပြန်ဆုံမှာ။
အပြောင်းအလွဲအတွက် ကြိုးစားပြီး ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်ကူး
ဖို့မကြိုးစားပဲ ကျွန်းပါတ်သင်္ဘော လောက်နဲ့ကျေနပ်နေ သမျှ
နှစ် ၆၀ မပြောပါနဲ့။ နှစ် ၆၀၀ ဖြစ်သွားမယ်။